Amajjii 1, Guyyaa WBO
Sabboonaan Oromoo Marti Bifa Armaan Gadiin Kabajata!
Injifannoon qabsoon Oromo haga ammaa galmeesse hundi sababa qabsoo hidhannoo tiin kan argaman ta’u hubachuu qabna. Mirgootni kunis kan galmeeffaman miseensota fi ummata keenya kuma hedduu dhaan lakkaawaman wareegama itti baasanii, maatiin kuma hedduun itti diigamee, qabeenyi hedduun itti dhabame fi qabsaawotni kuma hedduun itti dararamanii ta’uunis ifaa dha. Wareegama kanneeniin alatti bu’aan argamuu fi sadarkaan dammaqiinsi ummata keenyaa har’a irra gahe fiduun hojii salphaa ta’uu hin dandahu ture. Gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa ta’uun fi ajandaa siyaasaa gaanfa Afrikaa keessa seensisuun kan danda’e sababa qabsoo hidhannootiin ta’uun beekamaa dha. Dhimma kana madaala isaa hubachuuf, gaafa ABOn ijaaramee qabsoo eegalu; haalli sabbonummaa ummaa Oromoo maal keessa ture? jirreenyi ummata keenyaa addunyaa irratti hagam beekamaa ture? jedhanii gaafachuu gahaa dha. Dagaagginni sabbonummaa Oromoo har’a mul’atu fi dhimmi Oromoo beekumsi naannoo fi addunyaa keessatti horates bu’aa qabsoo hidhannoo wareegama ilamaan Oromoo hedduu dhaan argame ta’uun falamsiisaa miti.
Mirgi hiree murteeffatnaa ummataa har’a diinni, yoo xinnaate waraqaa irratti (heera biyyaa jedhamu keessatti) kaahe, beekuuf dirqame bu’aa qabsoon Oromoo hidhannoo dhaan argamsiise keessa tokko.
Kanuma waliinis Afaan Oromoo, barruu hin qabne, dhabamaa keessa ture; afaan ittiin baratamu fi hojiin mootummaa ittiin hojjatamu ta’uu danda’uun injifannoo galmeeffame keessaa tokko. Kunis, kan har’a ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaawaman ittiin baratan, hojjatan, barreessan fi ittiin boonan ta’ee jira, afaan Oromoo kun haala akkaan rakkisaa ta’e keessatti dirree qabsoo hidhatnoo keessatti kan dagaage fi muuxxeffame dha.
Addi Bilisummaa Oromo ifaan ummata Oromo fi addunyaa birattis beekumsa guddaa kan argate bara 1991 as jechuu ni dandeenya. ABOn teessuma Ebla 1991 Londonitti yaadamee turetti afeeramu fi sana boodas mootummaa cehumsaa Itiyoophiyaa kufaatii Dargii booda ijaarame keessatti qooda fudhachuun, utuu hidhannoo harkaa hin qabu ta’ee hin yaadamu ture.
Oromiyaan maqaafis ta’u bulchiinsa mataa ishee qabaachuun ishees sodaa diinni WBO irraa qabuun ta’uun beekamaa dha.
Injifannoo Qabsoo Hidhannoon Argaman yaadachuuf;
WBO Cimsuuf Waadaa keenya haaromsuuf;
Hawwii Oromoon human waraana jabaa ijaarratuun injifatnoo karaa waraanaa argamsiisuun bilisummaa isaa bira gahu jabeessuuf;
Sabboonummaa Oromummaa ijaaruu, Tokkummaa Oromoo cimsuun Oromoo humna jabaatti jijjiiruuf;
WBO bakka jirutti haamlachiisuuf;
Ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa jiran akka of beekanii qawwee isaanii diinatti galagalchuun Oromoo humneessuuf hojjetan jajjabeessuuf;
Miseensoti WBO, jagnooti Oromoo fincila diddaa kolonii, diddaa gabrummaa, mirga abbaa biyyummaa fi mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu Oromoof lubbuu isaanii dabarsanii kennaan wareegamni isaanii gatii malee akka karaatti hin hafne wal barsiisuuf;
Kaayyoo ABO kan WBOn itti diina kuffisee kufaa jiru kana bakkaan gahuuf dhaalonni ammaa fi boruu waadaa isaa haaromsuun gootummaan akka qabsoo itti jiru jabeessu fi itti fufu wal hubachiisuuf;
Jaallan qabsaawota Oromoo bakka adda addaa jiran, mana hidhaa, daggala, bobaa diinaa jala fi biyya ambaa jiran, akka wal cimsanii WBO cinaa hiriiruun xaba siyaasaa bifa hundaa jabeessan dhaammachuuf;
Barri harayaa bara Injifatnoo, Bilisummaa, Badhaadhinaa, Gammachuu, Quufaa, Dadaa fi Milkii uummata keenyaaf akka ta’u hawwii dabarfachuuf ayyaaneffatnee olla;
Amajjii 1, Guyyaa WBO ta’uu wal barsiisuu;
Wareegama WBO baasaa turee fi itti jiru, haala akkan rakkisaa keessatti WBO qabsoo isaa gaggeessaa qabsoo Oromoo baatee hardhaan gahuu wal hubachiisuun qabsoo hadhooftuu kanatti firii gochuuf Oromoo mara irraa waan eegamu marihachuuf;
WBO akkaataa itti gargaaranii waraana cimaa taasisuu dandahamu irratti wal marihatuu, wal gorsuu, waan WBO gumaachame walitti qabanii WBOf erguu, gargaaruuf;
Akka wal amantaa fi walitti dhiyeenyaan muddee 31 halkan walakkaa sa’aa 12:00 irratti dungoo qabsiisuun kabajaa WBO Qabnu fi injifannoo inni galmeessee dhaadhessuu fi gammachuu ibsachuu;
Faaruu Alaabaa Oromoo kana bakka bakkatti akka faarfamu walii dabarsuuni fi faarfachuun kabajamuu qaba!